Huntshu, isiXhosa sethu! | News24
Huntshu, isiXhosa sethu!
Iphephandaba lakho, iCity Vision, likwi phulo lokuphuhlisa noku khuthaza ulwimi lwesiXhosa.
Njengenxalenye yeli phulo sithanda ukukhuthaza nokumema abafundi ukuba babe yinxalenye yethu, ngokuthi bazi bandakanye ngokuhlomhla nokuthabatha inxaxheba kuyo yonke into yethu epapashwe kwi City Vision.
Sibongoza ababhali ukuba basiphe igama, ifani kunye nendawo umntu ahlala kuyo xa esibhalela.
Sikunye singenza umahluko omkhulu.
Ukusukela ngoku siza kuthi sipapashe isaci kunye neqhalo, rhoqo ngeveki, sicele intsingiselo kubafundi.
Zonke impendulo esithe sazifumana siya kuzi papasha kwiveki elandelayo rhoqo.
Ingaba ithini intsingiselo yezi zaci kunye neliQhalo?
ISACI: Ukwanda ngomlomo.
ISACI: Ukuba nomlomo omde.
IQHALO: Amangomso asa esihogweni.
Thumela impendulo yakho nge e-mail ku news@cityvision.co.za okanye uWhatsapp ku 083 721 7648
. Ingcuka eyambethe ufele lwegusha:
Nomthandazo Gungqa, Crossroads: Ngumntu ozenza into engeyiyo le nimbona eyiyo (nobungozi).
Mavis Nkata, Khayelitsha: Ngumntu oyingozi kodwa uzenza umntu olungileyo
G.D Dlepu, Khayelitsha: Ngumntu ozenza ilungisa abe ekhohlakele.
Bukelwa Mavis Gibe, Crossroads: Ngumntu omaqhinga, uzenza olungileyo ekhohlakele.
Bulelwa Thonga, Makhaza: Ngumntu ozenza umntu ongenguye, awulibali umntu elungile kuba ethule, umbona ngathi uthule, kanti inkohlakalo ephana ingapha kokuqonda.
Asanda Siswana, Samora Machel: Kuxa kubhekiswa emntwini ongathembakalanga, okanye ongena kumthemba ngoba angakujikela nanini.
Thabile Ntenteni, Khayelitsha: Ngumntu ozenza umntu angenguye.
Nondumiso Manya Toro, Philippi: Ngumntu ozenza ngathi ulungile engalunganga.
Vuyiseko Ndabeni, Site B: Umntu angangena phakathi kwabanye ngesihle ngembonakalo, kanti ufuna ukuba limaza. Ngumntu ozenza ngathi ulungile kanti unobungozi.
Bukelwa: Uyavimba, kodwa uyabawa.
Mavis: Ngumntu okwaziyo ukuqhatha ngamaqhinga.
Nondumiso: Ngumntu onobubi.
Nonkqubela Duda, eKapa: Ngumntu othetha kamnandi kanti yingozi njengo mthundzi.
Vuyiseko: Kukuqulatha amaqhinga ne nkohlakalo.
Inqweme lenkawu lidliwa babini, owesithathu ngumnqakathi:
Nomthandazo: Yinto yabantu abathile, hayi wonke umntu.
Mavis: Inqweme lenkawu lihlebo phakathi kwabantu ababini.
Dlepu: Ibhunga lelabantu ababini.
Bukelwa: Into yabantu ababini ayingenwa, owesithathu uyayimosha.
Bulelwa: Thethukuthi into yabantu ababini ayingenwa ngowesithathu, yeyabo babini. Uyoshiyeka wedwa esuphini babe bona bevana.
Asanda: Izinto zabantu ababini abathandanayo azingenwa okanye ingxabano zabo suzingena nzulu cebisa apho unako ukucebisa khona kuphelele apho ngoba bazophinda bavane aba bantu uzophind’ uthini wena?
Nondumiso: Ingxaki ilungiswa ngababini, owesithathu akafuneki.
Nonkqubela: Kaloku inqweme le nkawu yinto yabantu ababini, akafuneki owesithathu.
Vuyiseko: Xa into iyimfihlo okanye igqugula yeyabantu ababini, owesithathu akafuneki kulo mfihlo uza kuphuma nayo
Sabelo, Harare: Abantu ababini abathandanayo owesithathu akafuneki.
Ingcuka eyambethe ufele lwegusha: Le ntetha ibhekiswa kumntu oyingozi no mkhohlisi wokwenene. KwaXhosa yaziwa ingcuka ngokuthi izambathise ngofele lwegusha xa isiya kuzingela, ukuze iwungene kakuhle umhlabi.
Ubuqholo bengcuka: Esi saci sithetha ukukhohlisa okanye ukulahlekisa. Ingcuka sisilo esinamaghinga nesikhohlakeleyo. Xa ifika endlwini kulelwe iyakwazi ukuthatha umntu imbeke apho ithanda khona, ze imvuthele ngomoya onobushushu ukuze azole ngakumbi. Obo bubuqholo bayo.
Inqweme lenkawu lidliwa babini, owesithathu ngumnqakathi: Eli qhalo libhekisa kwigqugula lwabantu abathile bodwa. IsiXhosa sithi inkawu inenqweme elincinci kakhulu, elanele nje abantu ababini, owesithathu uyasilela.